Uurka iyo uureysiga | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Uurka iyo uureysiga
Bulsha:- Waqtiga sida caadiga ah uur la qaadi karaa, waa inta lagu jiro waqtiga caadadu maqantahey. Uurku waa laga bilaabo waqtiga ugxanta la bacrimiyey ey ku dhex kotro ilmagaleenta hooyada ilaa ilmuhu ka dhalanayo. Uurka waxa la sidi kartaa ku dhawaad 9 bilood ama 40 todobaad. Uureysiga waxa laga soo tiriyaa maalinta ugu horeysey ee caadadii ugu dambeysey, taas oo ah qiyaastii laba todobaad kahor inta aaney bacriminta lafteedu dhicin. Waxa la umulaa qiyaastii 40 todobaad kadib caadadii ugu dambeysey.